version 0.3.3 –9နယူးဘာသာစကားများ
စက်တင်ဘာလ 6, 2009 အားဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှု 12 comments
ကျနော်တို့ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ် Google က အထောက်အပံ့ထည့်သွင်းသည်9အသစ်ဘာသာစကားများ: အဘိဓါန် Afrikaans, ဘီလာရု, လန်, အိုငျးရစျ, အဘိဓါန် Macedonian, မလေး, ဆွာဟီလီ, ဝလေဝလေနှင့်အဘိဓါန် Yiddish. ကျွန်တော်တို့ဟာဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အောက်ပါအရေးကြီးသောပြဿနာတစ်ခုခဏယူသောအရာကျွန်တော်တို့ရဲ့ wordpress plugin ကိုမှထောက်ခံအားပေးမှုကဆက်ပြောသည်ပါပြီ. ကျနော်တို့ကဒျအဘို့အဘယ်သို့အလံကိုအသုံးပြုသင့်ပါတယ်? ငါတို့သည်ဆိုရမည်ချင်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးအရာအလံပွောငျးနိုငျသောဖြစ်ပါတယ်, သင်သည်ငါတို့ရွေးချယ်မှုများမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ပဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများလိုက်နာရန်နှင့်, အဘယ်သူမျှသင့်အတင်းအကျပ်ဖြစ်ပါတယ်.
တိုတိုဆွေးနွေးငြင်းခုံပြီးနောက်ကျွန်တော်ဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်နှစ်ခုအကြောင်းရင်းအဘိဓါန် Yiddish ဥရောပသမဂ္ဂအလံပေးရန်ဆုံးဖြတ်, တစ် – ဘာသာစကားကိုရှိတဲ့ဝေါဟာရ, မတိကျတဲ့တိုင်းပြည်နှင့်ဒုတိယအတွက် – အလံမဆိုတိုင်းပြည်ချိတ်ဆက်ထားမပြနိုင်သောဘာသာစကားတစ်ခုနှင့်ဆင်တူလမ်းအတွက်မည်သည့်တိကျသောတိုင်းပြည်အတွက်မခံမရပ်ပါဘူး. မည်သူမဆိုပိုကောင်းအကြံပြုချက်များရှိပါက, ငါတို့သည်သူတို့စကားကိုနားထောငျမှဖွင့်.
ဒါဟာလွှတ်ပေးရန်လည်းငြိမ်ဝပ်စွာနေတဲ့ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အောက်ပါအတိုင်း, အရာအတွက်ကျွန်တော်တိတ်တဆိတ် features အသစ်တွေကိုစဉ်းစားနဲ့, ဆွေးနွေးခြင်းပြီ, ကျွန်ုပ်တို့မကြာမီလွှတ်ပေးရန်နိုင်ပါလိမ့်မယ်မျှော်လင့်ပါတယ်အရာ, မည်သည့်အကူအညီနှင့်တုံ့ပြန်ချက်တန်ဖိုးထားလိမ့်မည်မဟုတ်ပေသာပေမယ့်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောထုတ်ကုန်ကယ်နှုတ်ကူညီပေးပါမည်.
အောက်တွင်တင်သွင်း: သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကြေညာချက်များ အတူ Tagged: အလံ sprite များ, ဂူဂယ်လ်ဘာသာပြန်, အသေးအဖွဲ, ပိုဘာသာစကားများ, လွှတ်ပေး, wordpress မှာ plugin
စက်တင်ဘာလ 7, 2009 တွင် 2:34 ညနေ
ငါ Plugin ကို Wordtube နှင့်အတူအနည်းငယ် Bug ရှာတွေ့.
မှားယှငျးမှတာ Wordtube မှ Transposh အ Playlist ကို၏ actication ပြီးနောက်. တော့ဘူးရှိုးရုပ်ရှင် dont.
ရုံ realy ကြီးမြတ် Plugin ကို !!!
စက်တင်ဘာလ 7, 2009 တွင် 2:45 ညနေ
ထို့ပြင်အဆိုပါ NGG Diashow ပိတ်ဆို့ထားလိမ့်မည်. တော့ဘူးပုံမှာပြသမည်မဟုတ်…..
စက်တင်ဘာလ 9, 2009 တွင် 11:13 နံနက်
သင့်ရဲ့ plugin ကိုရဲ့ဘာသာပြန်ကြိုးစားကြည့်ပါဖို့ကြိုးစားနေတဲ့သောအခါငါအလွတ်စာမျက်နှာများလာပြီပေါ့. ငါ WP အပေါ် plugin ကို၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းကို install ကြိုးစားခဲ့ 2.8.4 အ Foliotastic ဆောင်ပုဒ်နှင့်အ '' နေ့နှင့်အမည်နှင့်အတူ’ permalink ဖွဲ့စည်းပုံမှာ. ဤကိစ္စကိုဖြေရှင်းရန်ဖို့ဘယ်လိုပေါ်မဆိုအိုင်ဒီယာ?
စက်တင်ဘာလ 10, 2009 တွင် 6:06 ညနေ
hi, အလွန်အလားအလာကြည့်. သင့်ဘာသာစကားဘာသာပြန်ဆိုသူ plugin ကို Lighttpd ထောက်ပံ့လျှင်ငါအကြောင်းသိချင်ပါတယ်?
စက်တင်ဘာလ 10, 2009 တွင် 10:50 ညနေ
ငါက lighttpd အောက်မှာ wordpress နှင့်အတူအလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်မည်သည့်အကြောင်းပြချက်ကိုမမွငျပါဘူး, သင်သည်မည်သည့်ကိစ္စများရှိပါက, ကိုယ့်အကြှနျုပျသိပါစေ
စက်တင်ဘာလ 11, 2009 တွင် 2:21 ညနေ
hi… ဒီဟာအလွန် n1 Plugin ကိုကားလေးရှိ 1-3 မေးခွန်းလွှာ… and i hope you can tell me whats the answer 😉 ?
1. သင်သည်မည်သည့် cache စနစ်ရှိပါသလား?
2. အများမှာအဘယ်သို့သောအကြောင်းအရာ2status ကိုအဖျော်ယမကာ? လိမ္မော်ရောင် / စိမ်းလန်းသော
3. သင်ကရောင်းချ dont အဘယ်ကြောင့်သင့်ရဲ့ Plugin ကို soo သည်ကောင်း? ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့် website ရဲ့ backlink ပယ်ဖျက်ဖို့ကဝယ်နိုင်?
သငျသညျ Mail တွေကနေတဆင့်သို့မဟုတ်ဒီမှာပို့စ်အဖြစ်ငါ့ကိုပြန်ပြောနိုင်…
စက်တင်ဘာလ 13, 2009 တွင် 8:22 နံနက်
1. ဟုတ်ကဲ့, APC cache ကိုဘယ်မှာရှိနိုင်ပါအသုံးပြုသည်
2. ပထမဦးဆုံးပြသအလိုအလျောက်ဘာသာပြန်ချက်၏တိုးတက်မှုကို, ဒုတိယသင့်ဆာဗာမှရလဒ်များကိုချွေ၏တိုးတက်မှုကိုပြသထားတယ်စဉ်
3. အချီးမွမ်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, ငါဆဲသွားကြဖို့တစ်လမ်းရှိ, သငျသညျနေသမျှကာလပတ်လုံးသင် plugin ကိုလိုင်စင်ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အဖြစ် website ရဲ့ backlink ဖယ်ရှားနိုင်ပါသည် (နှင့်ပြုပြင်ထားသောအရင်းအမြစ်ရရှိနိုင်ပါစေ) သငျသညျကြောင်းမပါဘဲကဖယ်ရှားလိုက်ပါလျှင်သင်တို့ကိုငါဆင်းလိုက်ရှာမည်မဟုတ်, ဒါပေမယ့်ငါတစ်ခုခုကြောင့်ကြိုက်နှစ်သက်မည်မဟုတ်, ၎င်း၏ရှိရုံအလှည့်၌တိုးတက်ကောင်းမွန်ကူညီပေးသည်ရသော plugin ကို၏ဝါဒဖြန့်ကိုကူညီ.
စက်တင်ဘာလ 13, 2009 တွင် 9:59 ညနေ
hi…. ၎င်း၏အကြှနျုပျကိုတဖနျ…. အ tranlation ဝစ်ဂျက်အတွက် link ကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်အောက်ခြေကထည့်သွင်းဖို့တောင်း im… ကြောင်းသင်တို့အဘို့အ ok ဖြစ်လိမ့်မည်? ထိုသို့ပွုပါပွီလျှင်ပြီးနောက် … တစ်ဦးစစ်ဆေးမှုများအဘို့အသင် url ကိုစလှေတျမညျ….
စက်တင်ဘာလ 13, 2009 တွင် 6:13 နံနက်
ဒီအံ့သြဖွယ် plug-in ကိုများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်. ဘာသာပြန်ချက်ဆော့ဖ်ဝဲ algorithms ပိုကောင်းရတဲ့အပေါ်စောင့်ရှောက်.
yeah, သူ့ရဲ့ကောင်းတစ်ဦး plug-in ကိုနှင့်ဤအချို့သောစီးပွားဖြစ်ရှင်သန်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်. သင်ပင်တစ်ပရီမီယံထုတ်ဝေရောင်းချပြီးတော့အခမဲ့ဗားရှင်းကိုပူဇော်နိုင်ပါတယ်. သငျသညျဘာသာပြန်ချက်နှင့် ပတ်သက်. ရုံအသည်းအသန်ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်ထို့နောက်ရုံဖွင့်ထား “ဤစီမံကိန်းမှလှူဒါန်း” သို့မဟုတ် “ငါ့ကို coffe ကိုဝယ်” PayPal ကခလုတ်ကိုသင့်ရဲ့နာယကသငျသညျရေသွန်နိုင်အောင်.
စက်တင်ဘာလ 17, 2009 တွင် 11:28 ညနေ
ဥပမာအားအဘို့အကြှနျုပျ၏ client ကိုအဓိကဥရောပဘာသာစကားများနှင့်တရုတ်၌မိမိ site ကိုရရှိနိုင်ပါလိုလား.
ဘာသာစကားတခုဖျက်ဆီးလျှင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကို default မှာ google ဘာသာပြန်ချက်ပြန်သွားဖို့တစ်လမ်းရှိပါတယ်?
PS ကျနော်မဲပေးကြိုးစားခဲ့ကြ5အ wordpress ကိုအပေါ်ကြယ်တို့သည် directory ထဲတွင် plug ပေမယ့်အခိုက်မှာ errror ဖြစ်ရှိပုံပေါ်! 🙁
စက်တင်ဘာလ 22, 2009 တွင် 1:18 နံနက်
hi ရှေးရှေး, ဒီ plugin ကိုသက်ဝင်နေပါတယ်သောအခါကိုယ့်မှားယွင်းမှုတစ်ခုရ. ကပြောပါတယ်: "ဆန်းစစ်မှုအမှား: syntax ကိုအမှား, မမျှော်လင့်ဘဲ T_STRING, မျှော်လင့် T_OLD_FUNCTION သို့မဟုတ် T_FUNCTION သို့မဟုတ် T_VAR သို့မဟုတ် '}' "လိုင်း 26 ရက်တွင် /mnt/web2/41/43/5969543/htdocs/ebenbild/ebenbild/wp-content/plugins/transposh-translation-filter-for-wordpress/core/parser.php အတွက်
တစ်ကိုယ်တော် Jonas ကပြောပါတယ်
အောက်တိုဘာလ 21, 2009 တွင် 1:21 ညနေ
ငါသည်တ brandnew wordpress ပေါ်မှာဤစိတ်လှုပ်ရှားစရာ plugin ကို install လုပ် 2.8.4 အဘယ်သူမျှမပြဿနာတွေနှင့်အတူဆိုက်. ထိုအခါမူကား,, ဒါဟာအတော်လေးကောင်းစွာမှာ google ကနေ Auto-ဘာသာပြန်ဆိုပေမယ့်, ဒါကြောင့်သိမ်းဆည်းထား / လက်စွဲတည်းဖြတ်ရေးကိုမစောင့်သောပုံရသည်. မဆိုတူညီသော Auto-ဘာသာပြန်ထားသောစည်းကမ်းချက်များကို pop-up ပြန်ဖွင့်ပြီးနောက်. ဒါ့အပြင်ငါ apropriate Transposh ကျောက်ပြားကိုအချည်းနှီးသောကျန်ရှိသောကိုတွေ့. This seems to beamajor bug and renders this great plugin currently useless 🙁 . မဆိုအိုင်ဒီယာကကြိုဆိုကြသည်…
Transposh-wordpress အတွက် Changeset [c1505ba]: Small fix to object grouping in logging မေ 18, 2018
Transposh-wordpress အတွက် Changeset [1a4e6ec]: FirePHP is dead, migrate to chromelogger မေ 18, 2018
Transposh-wordpress အတွက် Changeset [6b1b5f0]: Adding Icelandic to Bing မေ 17, 2018